Home Wararka (AKHRISO) Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo heshiis kala saxiixday
(AKHRISO) Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo heshiis kala saxiixday
Qodobada ay ku heshiiyeen Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud & Madaxweynaha dalka Isu-Tagga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed Binu Saayid.
1- 20 Malyan oo ay Dowladda imaaraadka ugu deeqday Dowladda Soomaaliya.
2- in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed Visaha Imaaraadka.
3- in dib ay u bilowdaan duulimaadyadii shirkadaha diyaaradaha ee Imaaraadka Carabta (Fly Dubia)
4- waxaa dib loo furi doonaa Isbitaalkii Shiikh sayid ee imaaraadka kaas oo la xiray 2018.
5- in wafdi heer sare ah oo ka socda imaaraadka ay soo booqdaan Soomaaliya.
Previous article(Daawo) MW Xasan Sheekh oo kulan la qaatay dhiggiisa Dalka Imaaraadka Carabta
Next article(DHAGEYSO) Nin isaga oo maqan ay dil ku xukuntay PUNTLAND oo soo hadlay – sheegay arrimo yaab leh
Maxay tahay sababta uu isku casilay Wasiir Dhalac?
Dowladda Somalia oo digniin kasoo saartay fatahaada horleh oo dhaca